Fikradaha Waaweyni Muhiim Maaha | Martech Zone
Fikradaha Weyn Waxba Maaha
Axad, Agoosto 2, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
La shaqaynta ganacsatada guuleysatay dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxay ii ahayd il-furid. Marwalba waxaan ahaa nin fikrad ah, laakiin waxaan daawaday sida kuwa kale loogu fuliyo fikradahaas oo waxay noqdeen kuwa aad uga guuleysta sidaan ahay.
Isku-darka waa mid ka mid ah fikradahaas cajiibka ah - haddana waa shirkad laba jibaarmi doonta cabirkeed sanadba sanadka ka dambeeya. Maaha labanlaab fikradda darteed, in kastoo. Waa labanlaabmay maxaa yeelay Chris Baggott iyo Ali Sales ayaa lagu fuliyay fikradda.
Sanadkii la soo dhaafay, waxaan si aad ah u shaqeynayay, anigoo gacan ka helaya Chris iyo Ali, si aan u xoojiyo xirfadaheyga fulinta. Marwalba waan ku guuleysan jiray in fikradaha aan keeno xalka shaqada - laakiin waqtiyo ka waqti ayaan ku dhibtooday sidii aan u kala hormarin lahaa. Badanaa, waxaan ku mashquuliyey midka ugu qaylada badan intii aan ugu muhiimsanahay.
Ganacsiga, wax badan ayaa kaa mashquuliya. Ku mashquulsan macaamiisha aan wax bixin laakiin marwalba filan wax intaa ka badan. Ku mashquulisay astaamo kugu luminaya wakhti horumarineed oo qiimo leh, laakiin ha kobcin ganacsigaaga. Waxaa ku mashquulsan arrimaha maaliyadeed, taas oo carqaladaynaysa waddada dhammaystirka. Ku mashquulsan ganacsiyada kuwaas oo kaliya u fiirsanaya daryeelkooda halkii ay ka ahaan lahaayeen ganacsigaaga. Waxaa ku mashquulsan shaqaale aan cabbiraynin. Waxyaabahan oo dhan waxay ka jeedinayaan awoodaada fulinta.
Chris iyo Ali waxay iiga iibsadeen buug cabsi badan markii aan bilaabay DK New Media, Sida loo taajiro: Mid kamid ah Ganacsatada ugu Wanaagsan Dunida ayaa la wadaaga sirtiisa, Waxaa qoray Felix Dennis. Ma aha nooca buugga aad ka fekereyso - runti waa aragti weyn oo ku saabsan sida Felix u taajiray iyo u fiirsashadiisa dadka kale. Waa tan gabay yar oo cajiib ah oo uu buugga ku furayo:
Sida Loo Taajiro
Nasiib wacan? Xaqiiqdu waxay tahay
Inta badan ee aad ku dhaqanto,
Inta adag ee aad dhidid
Nasiib wanaag waxaad heleysaa.
Fikradaha? Waan soo marnay
Tan iyo markii Xaawa ay khiyaanaysay Aadam,
Laakiin iga qaad
Fure waa furaha.
Lacagta? Kaliya dhib
maalgashi u badan tahay.
Si aad u hesho waxa aad u baahan tahay
Adiga oo hunguri weyn.
Kartida? Tag saxiix.
Laakiin marka hore khamri cab oo cun.
Waa shaqo adag
Iyada oo kaftan hibo leh.
Waqti wanaagsan? Inaad ku guuleysato
Waa inaad ku jirtaa.
Marna ha soo noqon
Si aad u joojiso ama u jarto
Ballaadhin? Waa wax aan waxba tarayn!
Faa'iidadu waa xasilooni.
Wejiga dusha sare
Si aad ugu socoto labada lugood.
Tallaabada ugu horreysa? Qabo uun
Oo jidkaaga dhex mari.
Xusuusnow inaad duck!
iyo nasiib wacan!
Fikradaha waaweyni dhib malahan ilaa aad awoodid inaad ku fuliso iyaga. Halkan Indianapolis, waxaan ku tilmaami karaa in yar oo ganacsiyo ah oo ahaa (ama) ahaa fikrado xun - laakiin shirkaddu waxay heshay deeqo ama maaliyad ku saleysan awoodda fulinta ee fulinta. Hmmm… fulinive = fuline? Wax been ah ma jiraan halkaas!
Bilaha soo socda, waxaan si adag uga shaqeyn doonaa sidii aan mudnaanta u siin lahaa jadwalkayga iyo shaqadeyda si loo hubiyo inaan sare u qaadi karo koritaanka DK New Media. Hubaal - Waxaan qaadan karaa daraasiin $ 500 qandaraas ah toddobaadyada soo socda oo aan nolol fiican ku noolaado. Si kastaba ha noqotee, waan sii shaqeyn karaa si aan u helo qandaraasyo $ 25k ah hoosta suunka, hubiyo guushayda muddada-dheer, iyo inaan sameeyo wada-hawlgalayaasha istiraatiijiyadeed ee aan la shaqeynayo si aad u faraxsan.
Waxay ku jirtaa fulinta. Fikradaha waaweyn macno malahan.
Tags: masiixigacms iphone appguuldareysigaGitHubcalaamada ibmSuuq GoobidXalliya360
Waan ogahay xanuunkaaga inaad tahay nin fikrad leh. Aad ayaan u ahay oo markasta diyaar ayaan u ahay inaan caawiyo, taas oo iga dhigeysa inaan bixiyo macluumaad / fikrado qiimo leh oo aan hubo in maalin uun aan ogaan doono sida loo xiro oo aan uga faa iideysto. Waxaan ka eegay tan laba qodob.
1. Waxaan siinayaa fikradaha oo sida aad sheegtay waa inay ku dhaqmaan si ay u shaqeyso. Intooda badani ma raacaan, waxay umuuqataa inay tahay halgan dad badan.
2. Waxaan siinayaa figrad iyo biyo xireen haddii ay qaadan waayaan oo ay la ordaan oo keliya inay laba jibbaaraan iibkooda. Si rasmi ah ugama faa'iidaysan tan laakiin waxaan helay xoogaa hadiyado mahadsanid iyo waraaqo ah.
Qoraal wanaagsan iyo nasiib wacan!